DISITRIKAN’I MAHAJANGA II : Notanterahina tany amin’ny Kaominina Betsako ny fivoriana faharoa
Nitodi-doha tao amin’ny kaominina Betsako, anisan’ny mandrafitra ny distrikan’i Mahajanga faharoa ity ireo sampan-draharaham-panjakana avy aty ambonivohitr’i Mahajanga sy ireo solotenam-panjakana ao amin’ity distrika ity, izay notarihin-dRakotonindriana Tolotriniaina, lehiben’ny distrika. 15 avril 2019
Ho fanatanterahana ny politikam-panjakana dia ny tsy hisian’ny kaominina iray ao amin’ny distrika ho lavitra andriana no tanjon’izao fivoriana fanao isam-bolana izao, izay efa nosantarina tamin’iny taon-dasa iny. Taorian’ny kaominina Baonamary, tamin’ny volana marsa lasa teo dia i Betsako indray no nampiantrano izany, ny zoma 12 aprily tontolo ny andro. Ny tomban’ezaka sy jery todika tamin’ny fivoriana farany teo no nanombohan’ny lefitry ny distrika ny dinika ambany tafon-trano notontosaina tao amin’ny efitranon-tsekoly fanabeazana fototra ao Betsako. Naharitra adim-pamataranandro enina io fihaonana natao io.
Izany hoe, nafana tokoa ny adihevitra tao satria dia nanararaotra nilaza ny maharary azy, ireo tompon’andraikitra miasa any ifotony, ka nitondran’ny lehiben’ny distrika vahaolana tamin’ny alalan’ireo sampan-draharaham-panjakana niara-dia taminy. Nahitana ny avy ao amin’ny sampan-draharaha ny hetra, ny fahasalamam-bahoaka, ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety na ny Att, ny mpitandro filaminana sy ireo sokajin’olona toa ireo sojabe, ny lehiben’ ny dina, ny sefo fokontany, ireo lehiben’ny boriborintany mandrafitra ny distrikan’i Mahajanga faharoa iny. Nanantitrantitra teto Rakotonindriana Tolotriniaina, lehiben’ny distrika, fa tsy misy olona na fahefana ambony lalàna ao amin’ny distrika feheziny, koa tsy tokony hanao ampihimamba na hanararaotana fahefana nampindramina azy ireo ny solotenam-panjakana any amin’ireo kaominina isany avy.
Simba sady ratsy tanteraka ny lalana mihazo ny kaominina Betsako
Iray amin’ireo kaominina sivy mandrafitra ny distrikan’i Mahajanga faharoa, misedra olana tanteraka amin’ny resaka lalana i Betsako, satria manomboka eo amin’ny fiolanana Ankorefo manamorona ny lalam-pirenena fahaefatra iny ny fahasimban-dalana, ka tsy misy fiara tonga tanteraka any amin’ity kaominina ity, fa eo amin’ny fokontany Bekininina no farany azon’ireo fiara tsy mataho-dalana aleha, nefa dia mbola misy kilaometatra vitsivitsy atao dia an-tongotra. Sarety vao tena tonga ao an-tampon-tanànan’i Betsako. Manaitra ny tompon’andraiki-panjakana misahana ny asa vaventy ireo fokonolona sy ny tompon’andraikitra ao amin’ny distrika mba hijery akaiky ny kaominina Betsako, fa anisany kaominina iray mpamatsy ireo vokatra atobaka aty Mahajanga ireo tantsaha ao, saingy ny hamoahana izany no olana amin’izy ireo.
Fa nanararaotra nisaotra ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Andry Rajoelina koa nandritra ny lahateniny tao amin’io fivoriana io ny lehiben’ny distrika fa tsy nanao zanak’i Ikalahafa ity distrika ity amin’ny fanomezana ny "vary mora", satria efa nisy ireo kaominina sasany tao amin’ity distrika ity efa nanaovana ny fitsinjarana izany. Midadasika ny distrikan’i Mahajanga faharoa, izay ahitana kaominina miisa sivy, tsinjaran’ireo fokontany 75 mandrafitra izany distrika izany. Hitohy any amin’ny kaominina hafa indray amin’ny volana mey ny fivoriana fanao isam-bolana ho fitetezana ireo madrafitra ity distrika ity, hanakaikaizana ny vahoaka sy hamaliana ny filan’izy ireo, hoy hatrany ny lehiben’ny distrika, Tolotriniaina.